Strengthening Harmony Between Communities - Somali by Edmonton Police Service - issuu
Buuga Gacan Qabsiga oo Iswaafajinaaya Sidii loo Xoojin Lahaa Xiriirka Jaaliyadaha iyo Adeega Booliska Edmonton
Buuga Gacan qabsiga oo xoojiya is waafajinta
Waa maxaay kalinta Boliiska Edmonton?
Buugaan gacan qabsiga waxaa loogu tala galay in aad ku fahantid kaalinta ilaalinta Booliska Edmonton; kaa kaalmeeyso jidkii aad u mari lahayd adeega booliska; iyo sharaxa wixii aad ka filan lahayd haddii uu boolis kuu soo dhawaado.
Kaalinta Boliiska Edmonton waxeey tahay in ay ilaliyaan noolosha qofka iyo hantida, ilaalada nabada guud, nidaamka in ay dhowraan iyo in ay ka hortagaan oo ay xaliyaan dambiyasha. Markii booliska ay ka hortagiwaayaan dambiga, ujeedadooda waa in aay baaraan oo ay eedeysanayaasha la hor keeno sharciga.
Waxaa kaloo kuu sharxaa xubnaha labada jaaliyadood waajibaadkooda iyo mas’uuliyadahooda iyo sidii ay booliska cabir fiican ugu qaadan lahaayeen sideey kuu caawin lahaa, waxaa kaloo xoogineysaa adeega hishiiska booliska Edmonton. Waxaan si balaaran ugu madad celineynaa “Citizenship and Immigration Canada” kaalinta dhaqaale ay ka geeysteen, iyo taageerada, iskaashiga ballan qaadka ay booliska Edmonton ka geysteen u adeega jaaliyadaha kala duwan. Wadajirka ka wada qeyb galka ayaa dhalisay in buugan la soo saaro.
Shacbiga Edmonton waxeey xaq u leeyahin in ay ku amaan helaan bulshadooda iyo guryahooda. Boliiska waa garan karaa dhibatada ka jirta xaafadaha, waxeyna si hoose ula shaqeeyaan bulshada si loo hor tago dambiyasha dhici kara. Ujeedada waxey tahay in la horumariyo qiimaha nolosha ee dhamaan dadka wadanka u dhashay ee magaaladeena. Saraakiisha boliiska waxaa saaran mas’uuliyada ay tahay inay gutaan waajibaadkooda iyo inay akhlaaq muujiyaan wax waliba oo ay qabanayeen. Wuxuu adeega Boliiska Edmonton caddeynayaa in xubnaheeda ayna midab takoori karin qofna midabkooda, jinsiyadooda, asalkooda, luqadooda, diintooda, da’dooda, curyaanimadooda jireed ama maskaxeed, ama aragtidooda galmada, ama wax yaale kale oo la mid ah.
Howsha EPS waxaa hogaamiyo qiimayaal la qeexay: MUDNAAN - Adeeg sax oo sabab sax lo guto ah mar kasto. XIL GUDASHO - Masuuliyada - Go’aankaada iyo Ficilkaada XUSHMMAD - Xushmey dadka, sida adiga aad u jecesha in lagu xushmayo. WAX SOO SARID CUSUB - Aburid sare iyo wax so saarid. GEESINIMO - Awood sare oo aad ugu gudbikarti dhibka. BULSHO – Xushmeyn iyo in la sharafo dadka kala duwan ee bulshadda oo aan u Hurno nafta, aan Illalino iyo u Adeegno.
Lambarada Teleefoonada Aad Kala Xiriiri Kartid Adeeega Boliiska Edmonton Waac 9-1-1 xaalad deg-deg ama wax halis ah oo kaliya Haddii ayna halis ama degdeg ahayn waxaa wacdaa (780) 423-4567 Maxaa noqon kara degdeg ama halis? Waxaa ka mid ah xaalad deg-deg ama halis ah: Dab haddu kaco, dambi markaas dhacaaya, dhacda nafta halis tahay oo u baahan ambalanse. Waa maxaay xaalad aan deg-deg ama halis ahayn? Xaaladaha aan deg-deg ama halis ahayn waxaa ka mid ah: xatooyo, basaborka oo ka dhuma, khayaano iyo shiil baabuur oo qofna ku dhaawacmay aysan jirin. Wac: (780) 423 -4567 •	Haddi aad u bahantahay sarkaal boliis inuu yimaado meesha aad joogtid •	Haddi aad baahatid talo in lagaa siiyo sidii aad u gubin laheed dambi
9-1-1 waxaa loogu tala galay wixii DegDeg ama halis ah oo kaliya Marki aad wacdid 9-1-1, waxaa kula hadlayo ama kuu jawaabaayo xiriiyaha teleefoonka oo ku leh, Emergency. Ma waxaad rabtaa boliis, dabdamis ama ambalance? Haddii 9-1-1 xiriiriyaha teleefoon oo ku garan waayo luqaddada, wuxuu ku weeydinaya luqadda aad ku hadashid. Haddii uu xiriiriyaha teleefoonka 9-1-1 uu fahmi waayo luqada aad ku hadleysid, way ku wareysan doonaa si ay u fahmaan luqada aad ku hadleysid Haddii aad is af garanweysin sababtey doonto ha noqotee, xiriiriyaha teleefoonka wuxuu isla markiiba u soo diraa sarkaal boolis ah cinwaanka telephonka laga soo wacay Haddii xiriiriyaha telefoonka 9-1-1 uu fahmi waayo luqada aad ku hadleysid, waxaa laguugu xeri doonaa Qadka Adeega Luqadaha Turjubaan ku hadla luqadaada ayaa kaa caawin doono in aad u sheegtid xiriiriyaha telefonka. 9-1-1 waxa ay degdeg u tahay kadibna waa laguu soo diraa kaalmada aad u baahan tahay
Maxaan Sameeyaa Marka uu Boliis Gurigeyga yimado? Gurigada waa meel karaameysan. Makhamadaha Canadianka waxeey aqonsatey in qofka gurigiisa u yahay meel karaameysan. Waxaana xaq u leedahay in aad qof kale soo galin karin gurigaaga, shuruudo gaar ahaaneed oo keliya ayuu boliiska ku so gali karo gurigaada. Boliiska wuxuu gurigaada ku so geli kara marka: •	Haddi aad ku casuntid ama u ogolaatid gurigaada •	Haddi eey jirto arin deg-deg sida marka aad wacdey teleefoonka 9-1-1 •	Haddi eey wataan waraq sharciyeeysan oo u fasaxeeysa in uu guriga soo galo, sida awood siin qoraal ah ay ogolaade qaadi ama xaakim Haddii uu boolis albaabkaada yimaado, ka jawaab madaxaadane ku haay in ahmiyada koowaad ee booliska inay tahay nabad galyada dadweeynaha Inta badan, sarkaalka booliska laga yaab inay fahmin ama ay garan caadooyinka kala duwan ee dhaqankaada. Waa aad u muhiim ah in aad baahidaa gaarsiin kartid sarkaalka. Tusale ahaan, u sheeg sarkaalka haddii ay jiraan meelo aad ugu talagashay salaada. Ha ka cabsonin inaad weydiiso su’aalo haddii ay jiraan wax aadan fahmin. Teeda kale ha ka cabsonin inaad u sharaxdid wax yaabo qaas ah oo laga yaabo inuu sarkaalka fahmin. Sarkaalka wuxuu u yimid inuu caawiyo adiga iyo bulshadaba.
Maxaa dhici karo haddi aan ku hadlin ama aan fahmin Ingriiska? Dadka badanikisa ee ku nool bushadda, luqadda Ingiriiska wuxuu u yahay luqadda labad. Haddi aad ku hadlin af Ingiriiska , radi qof oo rerkada ah ama saxiib ah oo ku cawiyo arrimaha idin dhex yaalo adiga iyo boliiska. Haddii taas eey suragal noqon weeydo, Adega Edmonton Boliiska wuxu hasta list dadka u shaqeeyo boliiska oo ku hadla luqaddo kala duwan oo ku cawini karo. Weliga ha saxiixin waraq heshiis ah ama caddayn/dokumeenti la sharciyeeyey ila aad si ficaan u faxantid waxaa ku qoran.
Maxaan Subiya Haddi Sarkaal Boliis Ah U Dariqa Igu Joojiya? Sida badan, waxaad ku qeexi karta sarkaalka boliiska dharka ay xiran yihiin. Marmar waxaa dhacda in aad la kulan tid sarakaal boolis ah oo aan xirneyn ku libisneey dharka shaqada. Haddi shaki ka galo in u boliis yahay iyo in kale, waxaa weydinkarta caddeyta shaqadiisa, oo ku qorantahay magaciisa iyo numberkiisa shaqada ama badge (calaamad muujineyso) numberkiisa. Sarkaal boliiska wuxuu ku weeydidn kara magacaada, cinwaankaga, maxaa mesha ka subineysa, ama mesha aad u socotiid. Mar mar sarkaalka wuxuu ku weeydin kara aqoonsi ama id. Badana, ma u bahno In aad tustid aqoonsi. Lakiin. waxaa tala ah in aad si eded ah ugu jawaabtid su’aala u sarkaalka ku weeydiyo. Haddi aad diidid Inaad ka jawaabtid su’aasha sarkaalka ama uu sarkaalka u maleeyo Inaad carareysid, sarkaalka waa kaa shakin karaa markaas ayuu si qoto dheer kuu baaraa. Ujeeddada qofka leeyahay waxeey tahay in la gaaro qaraar ama dambiga xal loo helo.
Sarkaalka boliiska wuxuu kugu hayn kara in muddo ah meel ama ku xiri karaa xabbis labo xaaladood: 1.	Haddi laga shakiyo ama lo maleeya in aad dembi gashey 2.	Haddi arkaan adigo dambiya ku jirtid. Haddii uu sarkaal boolis ah kugu hayo meel in muddo ah ama uu kuu xiro labadaas sababood midkood, waa inaad sii saa magacaada, meesha aad degan tahay iyo wax adiga ku caddeynaayo. Sarkaalka boliiska waxaa lagu dhariyey in uu ka hortago iyo in uu baaro damdi owna dhowra amaanka. Mas’uuliyadahaas waxaa ka mid ah In uu wareeysto dad ka marag furi karo dambi ay goob joog ka ahaaymarqaati iyo In uu wareeysto dad, marka loo fiiriyo druufta, la shakiyo. Haddii lagu qeexi karo eedeysanayaasha sida ay u egyihiin ama waxa ay xiran yihiin, way fududaan lahayd In la noqdo sarkaal boolis ah, laakinse dhabtu waxey tahay in sarkaalka booliska ay tahay inuu wax baaro. Taasi macnaaheed waxey tahay in sarkaalka boliiska ay dhici karto inuu ku weydiyo inuu kaala hadlo waxyaalo adiga isla markaas aan micno kuu sameyneynin. Ha u qaadanin meel ka dhac Inuu kugu sameynaayo sarlkaalka ku waresanaayo. Wuxuu u bahan yahay in oo kula hadlo asago ku shegayao waxyalo macno ku subineyini marka hore. Ha ka xumaanin haddi sarkaalka boliiska ah u ku su’aalo. Shadadiisa ayu qabsana, asago ka hortagayo in ey dembi dhacin, asagona ku cawiinayo si u u badbadiyo adiga iyo bulshada. Waxey gudanaayiin waajibkooda, ka hortagaayiin dambiyada, adiga iyo bulshada amaankiina ayey sugaayiin.
Ma Inaan ka Jawaabaa Su’aasha Uu i Weydiiyo Sarkaalka Boliiska Ah ama aan caddeeyo qofka aan ahay?
Maxaan Subiya Haddi Sarkaal Boliis ah OO Igu Amro In Aan Joojiyo Baabuurka aan wado?
Guud ahaan, qasab ma ahan in isku sheegtid sarkaalka boliiska. Lakiin, waxa jiro xaladdo eey qasab kugu tahay, oo ey kamid yahin arrimaha soo socdo. •	Haddi aad babuur wadid •	Haddi aad dembi gashid, sida, adigo cabsan qamri, ama adigo dhul-dadoow gasha amar-la aan, ama ad sharci darro ku waddid babuur.
Boliiska wuxuu amar u qaba in uu joojin kara babuur mar kasta, si uu ogado in qofka baaburka haduu cabey qamri ama waxa maskadda badallo sida maandooriye/daroogo, ama u baabuurka makaanigo ahan uu fiicaan yahay, in aad qabtid shati ama ruqsadda baaburuurka lagu wado/ batante, in aad qabtid caymis oo weli dhicin. Midda ugu badan oo boliiska eey baaburta u joojiyan wa baaritan dambi la xiriro xad-gudub waddo.
Darufahan, waxaa ku roon in aad la shaqeeysid sarkaalka boliiska, una jawaatbid su’alaha u ku weeydiyo. Haddi u sarkaalka ka shakiyo in aad dambi gashey, ama u ku arko In aad dambile tahay, waxeey ku weeydin donnan qofka aad tahay. Maxaa yeele waxaa jirri karo sababo badan oo u bahan in aad u shegtid boliiska qofka aad tahay. 1.	Haddi eey boliiska eey radinayaan qof kale, waa In aad ishu sheegta, taaso ka illalisa in lagu qaldin qofkaas la raadinayo, adna xabsi u gali qof kale dambigisa. 2.	Haddi boliska eey rumesan yihin in aad dambi gashey, aadna u sheegin qofka aad tahay, xabsi ayey ku gey karan ila laga helo qofka aad tahay. 3. Haddi boliiska u maleyo in aad dambi yar gashey, aadna u sheegti qofka aad tahay, inti lagu xirilaha waxaa laga yaba in eey ku siyaan ganaax ama dhigniin oo aad hor tagi dontid maxkamad.
Sarkaalka Boliiska Ma i shegi Dona Sababta U I Xirey? Ha, Sarkaalka boliiska waa in u ku sheega sababta lagu xirey. Tasna waa wajibadka qeyta 10(a) oo ah Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Xad-gudub waddo oo noqdo labo qayb: Xad-gudub Waddo oo socod ah: Baaburka oo xoog u socdo, istagina nalka marku gaduud yahay, ama shatiga la’aan lagu wado, badasho lenka si sharci darro ah, ama aad baabuurkale oo aad ugu dhawaata, Xad-gudub waddo oo socod aheeyn: Sunka baabuurka oo laxiran, nalka joogsiga oo jaban, ama shatiga baabuurka lagu waddo la’aan, baabuurka oo la diiwaan-gelin, ama ceymis la’aan. Sabaabo kale oo lagu joojin karo ado baabuur wado waxaa ka mid ah: •	Baabuur la wado iyaddo maskada dhimmanen (sarkaan/khamri cabbid) ama aad joogsan calamadda joogsiga. •	Wadid khatar ah, ama si xum in aad u waddid baabuurka. •	Dambile la raadinayo. Sida adiga iyo qofka kula socda baabuurka oo u eeg qof uu sarkaalka radinayo. •	Nabadgelyo wax ku sabsan. Sababo badan daradeed, boliiska melaha eey ka shaqeeyaan waxaa ugu khatar badan joojinta baabbuurta waddo. Sarakiil badan aya lagu dhawacay, ama lagu dilay iyago wadaan joojin waddo. Sarkaalka wuxuu fasirta dadka ku jira baabuurka, asago wili Illalinayo baabuurta kale oo socoto waddada. Sababtas daradeeda, saraakisha waxaa la bara sidi lo joojiyo baabuurta waddada socoto, Iyago raacayo nidaam. Waxaa dhici karta in aan ka wal-walshid sida eey kula qabileen, kana ka wal-walin ma eey kula taga galin in eey ku wal-waliya.
Haddi u ku amro sarkaal boliice ah in aad staagtid adigo waddid baabuur •	Qaboji baabuurka, adigo baabuurka u leexiso dhinaca midigta ee waddada. •	Ha ka bixin baaburka ila oo sarkaalka oo ku sheego waxaa aa subi doontid •	Subi waxaa oo sarkaalka ku weydiyo in aad subisid. •	Gacmahada ku dhaf meel uu sarkaalka ka arkaayo, hana dhaq-dhaqaanin •	Diyaary dukumeetiyasha oo sarkaalka ku weeydin dono. Sharciga wuxuu leyahay qof kasto oo baabur waddo waa in u siyo sarkaalka booliska, shati waddida baabur, warqadaha diinwaangelinta, iyo ceymiska baabuurka. •	Haddi dukumeenti baabuurka ee kugu jiran qanadda baabuurka, ama borsada u sheeg sarkaalka boliiska inta aad u dhaqanin radinta dukumeentigas, •	Haddi ganaaxa lagu siiyo, si deganan u ogalaw. •	Ogolashada ganaxa ma ahan in aad tahay dambile. Haddi aad tahay qofka baabuurka wado, waxaa masuul ka tahay dadka baabuurka ku jira , gaar ahaan haddi eey uu dhaqman si caadi aheen, sida iyago ka turo darishadda baabuurka alabbo, ama darishadda in eey iska laliyaan. Waa In aad xubisa in eey dadka uu xiranyahin sunka babuurka.
Maxeey Tahay Xuquuqdeyda Haddi Xabsi Ley Galiyo (The Canadian charter of Rights and Freedoms) Xuquuqda Canadian oo Xer Qoraal ah ee Xurnimadda, oo caddayen xuquuqyo ku ilaaliyo haddi boliiska ku xiro. Xuquuqdas waxaa ka mid ah: •	In aad xaq u ledahay in lagu sheego dhaqsi sabaabta lagu xirey. •	In aad xaq u ledahay in garyaqaan ku difaco kuna taliyo, si dhaqsi ah iyado lagu sheegayo xuquuqdada. Ereyga “si dhaqsi ah “ waxaa laga wada marka xaladda gacanta lagu hayo, oo la hubaastee nabadgaaliyedda. •	In aad xaq aad u leedahay in aad wacatid garyaqaan oo adiga a ku kalsontahay. •	In aad xaq u leedahay garyaqaan lacag la’aan oo ka socdo legal aid lawyer. Haddii aad ka yar tahay 18 jir, waxaa xaq dheerad u ledahay In lagu ogolannayo in aad la hadashid waalidkada ama qof kale oo qangaar ah si dhakhso ah. Boliiska waxaa qasab ku ah in eey ku sheegaan xuquuqdada.
Maxaa Igu Dhici Kara Haddi Ley Xiro Ana Afka Ingiriska Ku Hadalin? Haddi lagu xiro oo afka Ingiriska aad ku hadlin, boliiska waxeey ku shaqeeyan hab ee kula hadlan afkaga, iyago isticmaalayo qof turjumee ah. Sidaas ayeey ku sheegidoonana xuqudada, Iyo shuruudaha ku xiran soo deyntaada xabsiga.
Gorma Sarkaal Boliis Wax Iga Raadin Kara? Caadi ahan sarkaal boliis waxuu qaba awood oo wax ku raadiyo, Iyado ku xiran xaladda iyo wuxuu aminsanyaha sarkaalka. Haddi lagu xiro, boliiska wuxuu raadiya hub,iyo waxyala adiga ku cawiyikaro baxsadashadada, Iyo waxyalo caddaynkaro xad-gudubkada oo lagu so xirey. Waxeey subiyana raadis lagu magacabo “frisk search”, sarkaalka oo tabto dharkaga Iyo jebabkaga, oo laga sibin dharka, oo eey ku jirin sida jaket, koofi, iyo jeeb. Iyado ee ku xiranthay xaladda, waxeey kaa raadin karan si deg-deg ah melaha kugu wareegsan, oo noqon kara baabuurkada, haddi aad ku jirtey markas lagu so xirey. Haddi lagu xiro baritan daraadis waqti go’an,sarkaalka boliiska ah wu raadinkaran wax kasto oo noqon karo hub. Wuxuu subin kara waxa lagu waco “pat down” ama baadigoob la baadinayo wax kasto oo hub noqon karo. Taasna ah taabasho gacmo oo la hubsanaayo In aad wadanin hub. Waa diidi karta in wax laga raadiyo. Lakin, waxaa ku go’aan sankarta in aad u fasaxtid boliiska in ey ku baaran, taas oo cawineysa in shakiga uu yarado. Haddi marki hore aad ogolatey in lagu baro, marka alale mar ka rabtid waa didi karta baritanka. Haddi aad ka helin sida ey wax u barayan, ha la dagalin sarkaalka boliiska. Waxaa qorta dacwad cabasho ah oo aad ka heleysid sida aad u subi laheey buugan gacan qabsiga, ama aad la xiriita garyaqaankada.
Maxaa Subiya Haddi An U Qabo Dacwad Cabasho Ah Boliiska ? Muwaadinta waxeey sugayan in sarkaalka boliiska ey ku maamulan heer sare dadkooda. Haddi muwaadinta ey ka cabadan sida oo lo galey, dacwadoda waa la raca, wana la baara si xaq-ah waqtigan iyo habka. EPS Professional Standard Branch ayaa ka masuul ah baridda dacwadda ku sabsan boliiska iyado lo qado hab aan eex ku jirin. Adiga waa dacweysan karta boliiska ama adegayaha u qaabbilsan Adega Boliiska Edmontom, ama sida u dhaqmey qof ah EPS oo sarkaal boliisk ah. Dacwadda wa in la qoro oo na saxiixa qofka dacwada qabo. Waxaan ku qorta dacwada waraq ama aad isticmal xab logu tala galey, oo aad ka heli kartid melkasto oo ah EPS boliiska saldhiggoda, ama Edmonton Police Commission. Dacwada waxaa ku qori karta ila hal sano gudaheeda oo dembiga dhacay. Dacwada waa ku dirikarta bostada ama fakis, ama aad u so dirtid melkasto oo ah EPS saldhigga boliiska, ama qof EPS sarkaal ah, ama Edmonton Police Commission Office. Waxaa wici karta Edmonton Police Service, Professional Standards Branch oo telephonka ah: 780-421-2676
La xirirka Edmonton Police Commision Xafiskooda: Haddi aad joojtid Edmonton wac: Telefoonka: (780) 414-7510 Faxis: (780) 414-7511 Ama u qor: Edmonton Police Commission Suite 171, 10235-101 Street Edmonton, Alberta T5J 3E9 Edmonton Police Commission waxa ka mid aha dad askar eehen oo qalad ka illaliyo Adega Boliiska Edmonton. Si boliiska ee u gutan shaqada sida la rabey, wax-qabad fiican leh oo na hufan, masuuliyad fiican leh dadka degaan Edmonton. Xirfad fiican iyo akhlaaq wanagsan waa waxaa ee Adega Boliiska Edmonton ku shaqeeyan iyo xafisaka Commissionka ah. Commissionka waxeey xaqiijiyan in dacwada si fiican lo baro qofkastana la siyo xaqisa.
Sidee U Noqda Sarkaal Boliis? Adega Boliiska Edmonton wuxuu si firficoon u raadiya dad ka mid ah jalliadda kale duwan oo magaladeena oo noqdan sarkaal boliis. Edmonton, dhaqannada kala gedgedisan oo ku batey magalada, taasna waxeey keentey adega boliiska u noqdo mid matalo dadka ku nool bulshada oo lo adego. Haddi aad rabtid in aad ka mid noqotid shaqada boliiska, waxaa shardi ah ina aad qabta sharraxa ey qoren Police Service Act.
Gaarahhan waxaa muhiim ah •	In aad tahay muwaadin Kanadian ah ama qabo sharci degmasho ah joogto ah. •	In ey jirkada iyo maskhaxahan ad uu fulin karti waajibaka jagada, adigo dhowreeysid nabadgeeliyaddada iyo tan dadweeynaha, •	Waa inad ku guuleystay ana dhameysa gradeka 12 ama kan la mid ah (GED). Haddi aad wax ku so baratey meel aan Canada aheeyn, waxaa u bahantahay qimen ah International Qualifications Assessment Certificate. •	In qabtid anshax iyo asluup dabecadeed, taaso oo ah In aad tahay qof dadka kale takuleeyneysa oo na la aminikaro, oo sharafna leh. •	In aad qabtid shati baabuurka lagu wado oo Alberta ah oo mudnaan buxo leh, oo na aad gabin wax ka badan lix arrurted demit-point ama puntoing laga gosto shatiga baabuurka lagu wado. •	In aad haysatid shahaado oo heer ah sida Aid/ CPR levelka C aad marka kugu horresa oo aad subiso kulan qarsonen. •	In aad ku baste baritanka noloshada la xirira, baritan lagu barayo in dayn la gula leyaay iyo damanad eey ka bixiso qof ku kaseseeso.
Fa faxin dherrad haddi aa u bahan tahay: waxaa ada Adega Boliiska Edmonton website ooo ah www.edmontonpolice.ca ama wac 780-412-2233.
Adeega Booliska Edmonton waxeey si weyn ugu mahad celinayaan isbaheysiga “Jeunesse-Famille de L’Alberta Society” oo abuurtay fikrada keentay in la soo saaro buugan gacan qabsiga.
Strengthening Harmony Between Communities - Somali